Ezumike nke Costa Rica Caribbean | Akụkọ Njem
Ezumike na Caribbean nke Costa Rica
Mariela Carril | | Costa Rica, Ihe ị ga-ahụ
Dị ka ebe nrụọrụ weebụ ndị njem na-ekwu Costa Rica ókèala nke mba America a si n’otu ụsọ oké osimiri ruo n’otu n’otu gaa na mba ndị ọzọ, site na Caribbean ruo Pacific, na-ewepụta usoro nke ọdịdị ala dị egwu na microclimates nke na-eme ka ọ bụrụ ihe nkiri ndị njem.
O nwere naanị 51 puku kilomita ise ma na mpaghara ahụ ị ga-ahụ site n'oké ọhịa okpomọkụ, site na nsụda mmiri na ugwu mgbawa, gaa n'ụsọ osimiri mara mma. Taa, anyị ga-elekwasị anya Oke osimiri Caribbean nke Costa Rica.
1 Costa Rica na ụsọ mmiri ya na Caribbean
2 Ihe ịga leta n'ụsọ oké osimiri Caribbean nke Costa Rica
3 Nke kacha mma n'ụsọ Oké Osimiri Caribbean nke Costa Rica
Costa Rica na ụsọ mmiri ya na Caribbean
Coastsọ oke osimiri nke mba n'ụsọ Oké Osimiri Caribbean lekwasị anya n'ógbè Limón nke ahụ dị ihe dị ka narị kilomita abụọ site n’ókè ugwu ya na Nicaragua ruo n’ókè ndịda ya na Panama.
Eziokwu bụ na Limón bụ a -akpali nnọọ mmasị mpaghara. Ogologo oge a na-enyeghị ya mkpa, rue mgbe ọ ga-ewu ọdụ ụgbọ mmiri, Puerto Limon, na etiti ụsọ oké osimiri, na-eche na ọ dị mma mbupụ unere site na Atlantic.
Rụ ụgbọ okporo ígwè na-esote Puerto Limón na obodo San José jikọtara jikọtara mpaghara ọ bụla echefuru echefu nke obodo ahụ "mmepeanya."
Ihe ịga leta n'ụsọ oké osimiri Caribbean nke Costa Rica
Osimiri mara mma, eke nkịtị pụtara ìhè, ndu ohia ijuanya, unere n’ugbo, oke ohia na ọmarịcha obodo ntàihu ọma.
You nwere ike ịgbazite ụgbọ ala ma soro ụzọ 32, akwara jikọtara Limón na ndị ọzọ nke mba ahụ tupu mbata ụgbọ oloko ahụ. Ga-achọpụta ihe niile m kwuru ugbu a, ọ bụ ezie na ọ dịghị adaba iji mee obere njem a na udu mmiri oge, Eprel na DisembaỌ bụ oge a na-akpọ «Atlantic oké ifufe».
Puerto Limón ke edem usụk O nwere ugwu ugwu Talamanca na mgbe anyi huru ya na map anyi na achoputa na o n’aga n’oké osimiri. On ya slopes na e nwere ụfọdụ obodo nta na e nwere ndị Ogige Ntụrụndụ Cahuita, Ebe njem nke mmiri turquoise na coral bụ nnukwu ebe maka nsị na mmiri. Cahuita, obodo ahụ bụkwa ebe izu ike zuru oke ma m ga - asị, ọkara hippie.
Ọ bụrụ n’ịga n’ihu n’ihu na ndịda ị ga-eru ochie Port tụlere mmadụ niile ebe kacha mma iji sọfụ n'akụkụ a nke mba. Nnukwu ebili mmiri na-etolite n’akụkụ mmiri na mgbe sọfụfụ ahụ na-akwụsị ndụ mmadụ na obodo nke Puerto Viejo, na n'abali ... na egwu di ocha na ndi ozo n'etiti ndi ozo.
N'ebe ugwu nke Puerto Limón, a na-ahụ ubi na ubi mmiri ozuzo, ok na-acha akwụkwọ ndụ nke ọma. Ọ bụ ụlọ nke Ogige Ntụrụndụ Tortuguero, n'etiti ndị kasị ama na mba na naanị inweta site ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ elu, na Ebe Mgbaba Ọhịa Mba ma ọ bụ Mahadum nke Colorado.
Nke kacha mma n'ụsọ Oké Osimiri Caribbean nke Costa Rica
Cahuita: obodo di mma, si Creole, ọdịbendị Afro-Caribbean. Ọ bụ naanị 43 kilomita n'ebe ndịda nke Puerto Viejo na bụ ndọta maka na-eto eto ndị njem nleta. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị bi na 4 sitere na ndị ọrụ Jamaica na-arụ ọrụ n'ubi ahụ ma nke ahụ ka na-emetụ. Osimiri ojii Ọ dị ezigbo nso, nwere aja ojii na ezigbo maka igwu mmiri, osimiri ndị ọcha nke Cahuita National Park dịkwa nso. Enwere ọtụtụ njegharị dị.
ochie Port: sọfụ ebe, agaghị ekwe omume ịhapụ n'ihi na ha jikọtara ya Omenala Creole nwere hippie na India. Dị nnọọ obere, mana ọ mara ezigbo mma. Nke a dị kilomita 18 site na Cahuita ma ị bịarute ma ọ bụ site n'ije ije n'akụkụ osimiri ma ọ bụ n'okporo ụzọ awara awara 36. O nwere osimiri ọcha na ahịhịa ndụ gbakwunyere tinyere ụfọdụ ogige ntụrụndụ mba dị nnọọ nso dị ka Cahuita National Park ma ọ bụ Gandoca-Manzanillo Mba Ọhịa. The Talamanca Ecotourism Association na-elekọta ọtụtụ njegharị ma na-akwalite njem na-adigide.
Tortuguero: ọ bụ obodo na ogige mba na Afro-Caribbean mmetụta a na-echekwa ya ebe a na ọdịbendị na gastronomy. Ebe ọ bụ na enweghị ụzọ gasị jikọtara akụkụ a na mba ndị ọzọ I nwere ike iji ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọelu rute ebe ahụ. Anyị ji ụgbọ mmiri si n’obodo Moin, nke dị nso na Puerto Limón, na-aga n’osimiri, jirikwa ụgbọelu si San José aga. Ogige ntụrụndụ mba ahụ dị ịtụnanya, nwee osimiri, oke ọhịa na oke ọhịa nke oke osimiri dị iche iche nduru, enwe, agụ iyi na nnụnụ. Hiking na kayaking bụ ndị a ma ama.
Pacuare: Ọ bụrụ na-amasị gị ndu ọdo Ọ bụ nnukwu njem n'ihi na ha na ụdị nduru ndị ọzọ rutere n'ụsọ mmiri ya ịkwa akwa ha. Ọ na - eme n’agbata Mee na Ọktọba. Enwere boating ma ọ bụ kayaking site na mmiri mmiri nke na-ejedebe n'akụkụ osimiri ma dịkwa nso bụ Osimiri Pacuare, dị mma maka rafting. Ọ bụrụ n’ị gara n’ogige Tortuguero, ị nwere ike ịbịaru nso n’ihi na ọ dịghị anya.
Manzanillo: n'ime Gandoca-Manzanillo Refuge bụ obodo Manzanillo, ebe njedebe nkwụ na-acha ọcha osimiri na mmiri dị jụụ. A na-agba ịnyịnya na kayak na nsị ma e nwekwara ọtụtụ ụzọ ụkwụ ime trekking ma ọ bụ gaa ịkụ azụ n'oké osimiri.
Ogwe osisi: Ọ bụ obodo dị na ndịda nwere otutu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, oke osimiri na izu ike dị jụụ, na omenala mestizo. Reggea chịrị n'abalị, e nwere ụlọ ahịa na-ere sọfụ ihe, ụlọ nri, Ogwe na ulo di iche iche. Ọ bụrụ na ịgbazite igwe kwụ otu ebe, ọ kacha mma ịmara ihe niile. I nwere ike ime Inggba igwe n’elu ugwu, kayak na ịga azu.
Mmiri ozuzo Tram Atlantic: ọ bụrụ na ị nọ gburugburu ebe a ị gaghị echefu obere ije a. Ọ bụ naanị 50 kilomita site San José na na emi odude ke otu njedebe nke Ogige Ntụrụndụ Brauilio Carillo. Ọ bụ a gondola njem nke otu awa na 10 nkeji, kanopi n'ime ọhịa, Kedu ka ị mere? Safezọ dị mma ma dịkwa ụtọ iji hụ enwe, agwọ, nnụnụ na-ekpo ọkụ, na anụ ọhịa bea.
N'ikpeazụ, anyị enweghị ike ịkwụsị aha obodo nke Puerto Limon ma ọ bụ dị ka ha na-ekwu na gburugburu ebe a Limón ka ọkpọọ. Ọ bụ obodo kachasị ukwuu na mpaghara ahụ ma ihe dị ka puku mmadụ 85 bi. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile sitere n'Africa n'ihi ya, ha niile bụ agbụrụ agwakọtara.
Ebe a na Limón enwere ahia ikuku, ogige ntụrụndụ, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, osimiri dị nso, Playa Bonita, na kedu ihe ọzọ ị ga-ekwu, ọ bụ ọnụ ụzọ nke njem niile m gwara gị na mbụ. Site na San José ị rutere na Highway 32, ọ dịkarịrị awa abụọ na nkeji 50 nke njem, ma ọ bụ na ị rutere n'ụgbọelu na mgbe ị nụsịrị map ahụ… iji nwee obi ụtọ na mpaghara Caribbean nke Costa Rica!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Costa Rica » Ezumike na Caribbean nke Costa Rica
Esme (TURKEY): Osimiri kachasị mma n’oké osimiri Aegean
5 haunting aga-enwe Halloween